सानो इखका कारण ६६ वर्ष पालेको विश्वकै लामो नङ्ग यसरी काटियो, म्युजियममा राखिने | Rajmarga
एउटा बस जति लामो नङ्ग, जुन अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा चलिरहेको प्रदर्शनीमा राखिएको छ । यसको सम्बन्ध छ ८२ वर्षीय श्रीधर जिल्लाससँग, जसले ६६ वर्षसम्म (१९५२ देखि अहिलेसम्म) आफ्नो नङ्गलाई बढ्न दिए।
यसक्रममा उनले आफ्नो सिधा हातको नङ्ग काटिरहे ताकि दैनिक काम गर्न उनलाई समस्या नहोस् । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार जब अन्तिम पटक श्रीधरको नङ्गको नाप लिइयो तब त्यसको लम्बाई ९०९.६ सेन्टिमिटर थियो ।
अब श्रीधले आफ्नो हातको नङ्ग काटेका छन् । काटिएको नङ्ग अमेरिकाको रिप्लीज बिलिभ इट आर नट म्युजियममा राखिएको छ। यति लामो समयसम्म नङ्ग नकाटेको र नङ्गको भारी वजनका कारण श्रीधरको बायाँ हातमा कयौ प्रकारका समस्या छन्।
भारतीय राज्य महाराष्ट्रको पुणेका हुन् । श्रीधर अब आफ्नो औंला चलाउन सक्दैनन् र आफ्नो हात खोल्न पनि सक्दैनन् ।
६६ वर्षमा लम्बाईका साथसाथै नङ्गको मोटाई पनि निकै बढेको थियो । श्रीधरको नङ्ग काट्नका लागि फलाम काट्न प्रयोग गरिने एउटा सानो मेशिन नै प्रयोग गर्नु परेको छ।
सन् २०१५ मा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको टिमले श्रीधरको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । त्यतिबेला उनले भनेका थिए–मेरो नङ्ग निकै नाजुक छ । यसको निकै ध्यान राख्नु पर्दछ । खासगरी रातमा सुत्ने बेला ।
किन पाले नङ्ग ?
अमेरिकाको यो म्युजियममा राखिएको आफ्नो नङ्गको श्रीधर चिल्लास प्रशंसा गर्दछन् । तर महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि ६६ वर्षसम्म उनले नङ्ग किन काटेनन् र किन यति लामो हुन दिए ?
यसको जवाफमा श्रीधर चिल्लास भन्छन्–यसको एउटा पूरानो कथा छ । त्यतिबेला म १४ वर्षको थिएँ । म र मेरा साथीहरु विद्यालयमा खेलिरहेका थियौ । हाम्रा एक जना शिक्षक थिए,जसले कुनै साँस्कृतिक कारणले हातको सबैभन्दा सानो औलाको नङ्ग पालेका थिए । म खेल्ने क्रममा अचानक उनीसँग ठोक्किएँ। त्यतिबेला उनी निकै रिसाए । तर मनमनै मैले यो प्रण गरेँ कि उनकोभन्दा लामो नङ्ग राखेर देखाउनेछु ।
नङ्ग काटेपछि कस्तो लाग्यो ?
यति लामो समयपछि नङ्ग काटेरपछि उनलाई कस्तो लाग्यो ? यस विषयमा उनी भन्छन्–मैले सधैं आफ्नो नङ्गको विशेष ख्याल राखेँ। नङ्ग निकै नै नाजुक हुन्छ । मैले यो नङ्गका साथ ६६ वर्ष बिताएँ । जब मैले यसलाई काट्ने विषयमा सोचेँ तब मेरा लागि एउटा निकै ठुलो निर्णय थियो।
श्रीधर चिल्लास भन्छन् कि न्युयोर्कको रिप्लीस बिलिभ इट आर नट म्युजिमले उनलाई विश्वास दिलायो कि म्युजियमले उनको नङ्ग सम्हालेर राख्नेछ । श्रीधर भन्छन्–मलाई विश्वास छ कि नङ्ग काट्ने मेरो निर्णय सही सावित हुनेछ । मानिसहर त्यहाँ गएर मेरो नङ्ग हेर्न सक्नेछन् । बीबीसी हिन्दी
Previous post: श्रीमानलाई मारेर आफ्नै कोठामा गाडेर त्यहीँमाथि प्रेमीसँग सुत्ने श्रीमती !
Next post: एउटा यस्तो सहर, जहाँ आफ्नै श्रीमती बलात्कृत भएको हेर्न विवश हुन्छन् पुरुष
सुरक्षित आवास गृहमा महिला झन पीडित, गृहमा यस्ता असुरक्षा छन्